I-Wi-Fi ibhetri engafaniyo kwisikali esenzekelayo - I-Ocean-Components.com
IkhayaIindabaI-Wi-Fi ibhetri engafaniyo kwisikali esenzekelayo
I-Wi-Fi ibhetri engafaniyo kwisikali esenzekelayo
Ezi "ziWiFiScopes zibonisa ukukhula kobunjineli beTiePie, eyokuqala kunye necandelo lezemoto kuphela elixhunyiwe kwi-Wi-Fi.
isikali sokuvavanya sinezinto ezifakwayo ezahlukileyo ”, ngokweNkampani, ethe kwiveki ephelileyo yazisa i-Wi-Fi scopes ezineenjongo ezahlukeneyo. "Indawo ezinobunzima obahlukeneyo zemoto zii-oscilloscopes zemihla ngemihla zeenjineli zezithuthi kwaye zinokuba
isetyenziswa nge-LAN, iWi-Fi okanye i-WAN Ethernet, kodwa isebenzisa uqhagamshelo lwe-USB 2.0 / 3.0.
Ukuba nebhetri eyakhelwe ngaphakathi ivumela imilinganiselo yokulinganisa ngaphandle kwamacingo ukuba yenziwe yodwa, kwaye i-Ethernet ene-wiring ivumela ukusebenza kumgama omde. "Ngonxibelelwano lweWiFi, imilinganiselo engenacingo inokwenziwa kwimoto, apho ikhompyuter akufuneki ilunge ecaleni kwemoto," utshilo uTiePie, esongeza ukuba ulwazi oluthile kuthungelwano aludingeki kunye nePC 'Multi Channel' isoftware ibonisa izixhobo ezikhoyo ze-USB kunye nezixhobo zenethiwekhi eziza kukhethwa.
Ukuqhubeka kwexesha lokufumana idatha kunokwenzeka nge-WiFi, i-LAN, i-WAN okanye i-USB, ngesantya esahlukileyo kuxhomekeka kwisimo esibonakalayo - eyona yona iphezulu yi-200Msampulu / s.
Imilinganiselo eyahlukileyo yokuqhagamshela ngesidibanisi se-BNC, inye kuphela kwisikali (jonga kwitheyibhile engezantsi) onokukhetha ukuphela.
Njengemeko yokujonga ubungakanani, isoftware ehambelana nayo inokusebenzisa izixhobo njenge: umhlalutyi wesaqhulo, ilogo yedatha, ivoltmeter okanye iprotocol yokuhlaziya-iziphumo zinokuboniswa kwiigrafu, iitafile kunye nokuboniswa kwesimbo semitha.
Isoftware iquka amanqaku eemoto afana ne: crankshaft signal inokujikwa ibe sisantya se-injini (rpm), okanye iboniswe njenge-crank shaft angle ngokuchasene nexesha. Imiqondiso yomjikelezo womsebenzi kunye nokuntywila kobubanzi beempawu eziguquliweyo, umzekelo ezisetyenziselwa ukuqhuba iivali, zinokuguqulwa zibe ziigrafu.
Ukuseta ngokukhawuleza kuyakuvumela imilinganiselo ukuba ikhethwe ngeewotshi ezimbalwa zemouse. Ngaphezulu kwe-700 zikhona, kubandakanywa izixhobo zenzululwazi zezithuthi kunye nee-activators, nganye inezixhobo ezifunekayo
iisetingi, umzekelo imiqondiso kunye nolwazi lwangasemva lwendlela yokudibanisa isixhobo.
Isampulu / isampulu 1G 500M I-50M
Isisombululo 8/12/14 / 16bit 8/12/14 / 16bit 12/14 / 16bit
buffer 256 Mpoint 256 Mpoint I-128kpoint
bandwidth 250MHz 250MHz I-50MHz
igalelo umahluko /
-odwa-ukuphela umahluko umahluko
NgokuqinisekileyoQhagamshela ijelo ngalinye ijelo ngalinye ijelo ngalinye
Kwisitishi ngasinye amandla ancitshisiweyo
ixabiso lesiseko E 2128,00 E 1794,00 E 1888.00